एक शिक्षित पुरुषले कसरी बनाउँछ कुमारी आमा ? « Nepal Bahas
एक शिक्षित पुरुषले कसरी बनाउँछ कुमारी आमा ?
प्रकाशित मिति : १ जेष्ठ २०७६, बुधबार १८:१७
नेपाली समाजमा कुनै पुरुषले कुमारी केटीसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेर शिशु जन्मियो भने त्यसको भागीदार महिलालाई मात्र मान्ने गरिन्छ । उक्त केटीलाई समाजबाट पनि बहिष्कारसमेत गरिन्छ । यो कुरा कहिल्यै सोचिन्न कि महिला स्वयंको इच्छाले मात्र शिशु जन्मिँदैन । एउटै जातका केटा र केटी भए उक्त सम्बन्धले विवाहको रुप लिन सक्छ तर पुरुषभन्दा महिलाको जात कथित तल्लो छ भने उनले झनै ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पीताम्बर उनलाई आफ्नो नामको सिन्दुर पोते लगाइदिएर समाजमा आफ्नी श्रीमतीको दर्जा दिन धेरै सङ्घर्ष गर्छन् तर पीताम्बरको परिवारले पनि उनलाई स्वीकार गर्दैन । परिवारकै आग्रहमा पीताम्बरको अर्कै केटीसँग विवाह हुने पक्का हुन्छ । अन्ततः पीताम्बरले उनलाई आफन्त पर्ने दिदीको घरमा लगेर राख्छन् । पीताम्बरको विवाह भएकै दिन सरस्वतीले परीलाई जन्म दिएकी हुन्छिन् । पीताम्बरको विवाह भइसकेपछि उक्त गाउँमा बसेर आफ्नी छोरीलाई पहिचान दिन नसक्ने कारणले गर्दा उनी काठमाडौं आइपुगेकी हुन्छिन् । सरस्वतीले आफ्नी छोरीलाई सम्झाउँदै भन्छिन्, “छोरी, तिम्रो शरीरभरि रातो रगत सल्बलाएको छ । तिम्रो बाबा पानी थियो, उसको अस्तित्व सब मभित्र घोलिएर रातो रगत बन्यो । ऊ मभित्र मिसिएर मलाई पानी बनाउन सकेन । ऊ आफैं मभित्र मिसिएर रगत बनेर रह्यो । तिमीभित्र मेरो रगत छ भन्ने मात्र सोच तिमी ।”
एक कुमारी आमाले आफ्नो सन्तानलाई हुर्काउन कस्ता खाले समाजका लान्छनालाई पार गर्दै जान्छिन् भन्ने कथालाई समेटेर उपन्यासकार सीमा पुरीले ‘परी’ उपन्यासमार्फत चित्रण गर्न खोजेकी छन् । पुरीले उपन्यासमार्फत नेपाली समाजमा विद्यमान जातीय छुवाछुतलाई समेत उजागर गर्न खोजेकी छिन् । उनले उपन्यासमा एक कुमारी आमाले विकट ठाउँबाट काठमाडौं आइपुगेर आफ्नी छोरीलाई कस्तो सङ्घर्षबाट वकिल बनाउँछिन् भन्ने कथा समेटेकी छिन् ।
सानैदेखि समाजमा घृणाको पात्र बनेकी परी आमाले आफ्नो कथा सुनाइसकेपछि मामाघर र आफ्नो पिताप्रति उनको मनमा थप घृणाको भावना पैदा हुन्छ । उनी अधिवक्ता बन्छिन् । एक दिन उनको मामाको मुद्दा आइपुग्छ । आफ्नी आमा घृणाको पात्र बनेर सबैबाट चरित्रहीन भनिएको पीडालाई सम्झिएर उनले मामाको मुद्दा नहेरौँ कि भनी सोच्छिन् । उनले मामाको मुद्दा हेरेरै छाड्छिन् र जिताउँछिन् पनि । मुद्दा जितेर छुट्टिने बेलामा मामाले उनलाई मुद्दावापतको रकम दिन सोध्छन् तर परीले रकम आफूले अहिले नै नलिने, आफूले दिएको ठेगानामा ल्याएर छाडिदिन आग्रह गर्छिन् र ठेगाना छाडेर जान्छिन् । परीको उद्देश्य आमा र मामाको भेट गराउने उद्देश्य हुन्छ ।
चलचित्रको दृश्यजस्तै उपन्यासकारले थुप्रै प्रसङ्गलाई रचनात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरेका छन् । महिलाले चाहे भने कसैको सहाराविना नै आफ्नो पहिचान बनाउन सक्छन् भन्ने सन्देश उपन्यासमा पाइन्छ । उपन्यासकारले आफ्नो कृतिमार्फत समाजमा विद्यमान जातीय छुवाछुतलाई उजागर गर्न खोजिएको छ भने एकै आमाबाट जन्मिएका सन्तानभन्दा फरक आमाबाट जन्मिएका सन्तानको सम्बन्ध मजबुत हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि उजागर गर्न खोजेकी छिन् । मीना घोरसाइनेकाे सहयाेगमा